Fepetra ara-toekarena :: Naato ny fandoavana ny ankamaroan’ireo hetra • AoRaha
Fepetra ara-toekarena Naato ny fandoavana ny ankamaroan’ireo hetra
Fepetra maromaro no noraisin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola ho fitsinjovana sy fiarovana an’ireo orinasa tsy miankina sy ireo sampan-draharaha misehatra eo amin’ny lafiny fizahantany ary ny fitaterana, manoloana an’ireo toromarika napetraky ny fitondram-panjakana hisorohana ny fihanaky ny aretina “Coronavirus”. Lehibe indrindra ny fampiatoana ny fanonerana an’ireo karazan-ketra maromaro, araka fivoriana niarahan’ireo mpitantan-draharaha eo amin’ireo sehatra tsy miankina sy ireo solontenan’ny minisitera, omaly. Hiato na foanana ao anatin’ny volana vitsivitsy ny ankamaroan’ireo hetra alain’ny fanjakana.
Ohatra, ny fandoavana an’ireo hetra alaina amin’ny tombom-barotra. Aorian’ny 30 jona 2020 vao hitohy ny fandoavana azy ho an’ireo orinasa afaka haba sy amin’ ny lafiny fizahantany. Mihemotra hatramin’ny 15 mey 2020 indray ny fandoavana ny hetra amin’ireo entam-barotra vokarin’ireo orinasa tsy miankina, raha toa ka noesorina ireo hetra alaina amin’ ireo fitaovana rehetra ilaina amin’ny ady amin’ny aretina “coronavirus”.
Voatazona kosa ny fakàna ny tataon-ketra amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa. Nofoanana ny fanaraha-maso ny fampidiran-ketra amin’ireo orinasa tsy mian kina miezaka mafy ny hanohy ny asa aman-draharahany mba tsy hikatona. Toy izany koa ny fanafoanana ny sazin’ireo mpandrahara mampi ditra vola vahiny hatramin’ny 80 isan-jato eto amintsika.
Fotoana fanampiny roa volana indray no omena momba ny fandoavana an’ ireo hetra isam-batan’olona sy ny an’ireo orinasa, sady tsy arahina onitra na sazy ara-bola. Taorian’ny toromariky ny Filoham-pirenena, afak’omaly alina, dia afaka miandry telo volana ny fanohizana ny fanonerana ny trosa nalaina tany amin’ny banky.
Nodidiana ao anatin’ity fanapahan-kevitra ity ny fanomezana tambin-karama isam-bolana ho an’ireo marefo izay hamoahana didim-panjakana ny fampiharana azy.
Fiadiana amin’ny « coronavirus » :: Homena tambin-karama manokana ireo mpiasan’ny fahasalamana